‘ब्रिज कोर्स’ चिनाउने बोस्टन एजुकेसन « Loktantrapost
‘ब्रिज कोर्स’ चिनाउने बोस्टन एजुकेसन
९ बैशाख २०७३, बिहीबार ०१:५६
दश वर्ष अघि ‘व्रिज कोर्स’ पढ्न आउनका लागि बोस्टन एजुकेसन फाउन्डेसनले विज्ञापन गर्दा झापामा अनौठो मानिएको थियो । व्रिज कोर्स के हो भन्ने विषयमा अधिकांशलाई ज्ञान थिएन । ‘किन पढ्नु पर्यो व्रिज कोर्स ?’– शिक्षकहरू नै भन्थे । अभिभावकले पनि ‘सीधै कलेजमा भर्ना हुँदा भइहाल्यो नि, किन व्रिज कोर्सको झेउलोमा फँस्नु ?’ भन्ने सोच्थे ।
अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी तीनै थरिको बुझाइ उस्तै थियो । एसएलसीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याए साइन्स, मध्यम स्तरको अङ्क ल्याए कमर्स र जसोतसो पास गरेको भए यताउती मन नडुलाई सीधा आर्टस् फ्याकल्टीमा भर्ना हुनु पर्छ भन्ने आम सोचाई थियो । विद्यार्थीको रुचि के हो ? कुन विषय पढ्दा कस्ता अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् ? कुन कलेजमा पढ्दा राम्रो हुन्छ ? यस्ता प्रश्नतर्फ घोत्लिनेहरू कमै थिए ।
साइन्समा सिक्किमबाट उच्च शिक्षा सकेर २०४५ सालमा आएका सुमन शर्मा जमरकट्टेललाई एसएलसी पछिको शिक्षाप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको सोचाइलाई बदल्नु पर्छ भन्ने लाग्यो । उनले निकै सोचेर २०६३ सालमा विर्तामोडमा बोस्टन एजुकेसन फाउन्डेसन सञ्चालनमा ल्याए । जसले उच्च शिक्षाका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन थाल्यो ।
बोस्टन एजुकेसन फाउन्डेसनले नै झापामा पहिलोपल्ट ‘ब्रिज कोर्स’ चिनायो । आज ‘ब्रिज कोर्स’ बारेमा आम विद्यार्थी र अभिभावक जानकार छन् । ‘ब्रिज कोर्स’ पढाउने संस्था पनि बढेका छन्, व्यापार पनि बढेकै छ । तर झापामा यसको प्रवेश गराउने श्रेय चाहिँ बोस्टन एजुकेसनलाई नै जान्छ ।
‘ब्रिज कोर्स’ एसएलसी जाँच दिएर फुर्सदमा बसेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको ढोकासम्म सजिलै पुग्न सघाउने पुल नै हो । एसएलसीसम्म पढ्दा विद्यार्थीले जुन वातावरणको अनुभूति गर्छन्, कक्षा ११ मा विल्कुलै पृथक हुनु स्वाभाविकै हो । अध्यापन र अध्ययन शैली पनि फरक हुन्छ । नयाँ शैलीमा आत्मविश्वासका साथ घुलमिल हुन र नयाँ कोर्सका बारेमा अग्रिम अपडेट रहन ‘ब्रिज कोर्स’ अचुक उपाय हो । यही कुरा बोस्टन एजुकेसन फाउन्डेसनले आम शिक्षक, बिद्यार्थी र अभिभावकलाई बुझाउन निकै मिहेनत गर्नु परेको थियो ।
झापामा ‘बोस्टन’ खुल्नु अघि एसएलसीपछि उच्च शिक्षाको ढोका छिर्न लागेका विद्यार्थीहरूमध्ये कोही अभिभावकको करकापले, कोही आफन्तको मनखुशीले र धेरै चाहिँ लहैलहैले कलेजको विषय रोज्थे । एसएलसी परीक्षा दिएपछिको तीन महिनासम्म विद्यार्थी ‘दाम्लो चुडिएसरह’ बरालिन्थे । ‘ब्रिज कोर्स’ले विद्यार्थीलाई आफु अब ठूलो भइसकेको एकातिर अनुभूति गराउँछ भने अर्कातिर बरालिनबाट जोगाउँछ ।
‘एसएलसीसम्म एउटा लयमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई कक्षा ११ को ढोकाबाट प्रवेश गर्दा नयाँ आत्मविश्वास र ऊर्जाको जरुरत हुन्छ’, बोस्टन एजुकेसनका अध्यक्ष सुमन शर्मा जमरकट्टेल ब्रिज कोर्सको महत्व दर्शाउँदै भन्छन्–‘ब्रिज कोर्सले त्यही आत्मविश्वास र ऊर्जाको काम गर्छ ।’
२०६३ सालमा बोस्टन एजुकेसनले पहिलो पल्ट ब्रिज कोर्स पढ्न विज्ञापन गर्दा कोही आएनन् । किन आएनन् त विद्यार्थी ? सञ्चालक जमरकट्टेलले यसको रिसर्च गरे । ब्रिज कोर्स के हो भन्ने नबुझेरै विद्यार्थी नआएको निस्कर्षमा पुगेका उनले यसलाई बुझाउन अभियानको खाँचो देखे । त्यसपछि उनी एउटा थोत्रे बाइक कुदाएर स्कुल स्कुलमा पुगेर पहिलो चरणमा शिक्षकलाई ब्रिज कोर्सको विषयमा बुझाउन थाले । अभिभावक र बिद्यार्थीलाई पनि घर घरै पुगेर उनले ‘ब्रिज कोर्स यस्तो हो’ भनेर बुझाउन थाले ।
‘बल्ल परिणाम सकारात्मक आउन थाल्यो’, स्कुल अभियानले ब्रिज कोर्स चिनाउन मदत पुगेको बताउँदै बोस्टनका सञ्चालक उनी भन्छन्–‘विद्यार्थीहरू ह्वारह्वार्ती आउन थाले ।’ ब्रिज कोर्स एसएलसीको रिजल्ट नआउँदासम्म पढ्नु पर्ने भएकाले विद्यार्थीको मन पढाइबाट बरालिन नपाएकोमा अभिभावकहरू पनि खुशी नै हुने गर्छन् । किनकि, यही ३ महिने फुर्सदले कतिपय विद्यार्थीलाई गलत बाटोमा हुत्याउन पनि सक्छ । ब्रिज कोर्स पढ्नेले गलत ट्रयाकमा हिड्ने चान्सै पाउँदैनन् ।
झापामा ‘ब्रिज कोर्स’ चिनाउने इतिहास रचेका बोस्टन एजुकेसनका अध्यक्ष जमरकट्टेल एसएलसी जाँच दिएका सबै विद्यार्थीलाई ‘ब्रिज कोर्स’मा भर्ना हुन सुझाव दिन्छन् । कक्षा ११ र १२ मा पढाइ हुने पाठमा आधारित भएर बोस्टन आफैले ब्रिज कोर्सको पाठ्यक्रम विकसित गरेको छ । ‘ब्रिज कोर्स’ पढ्ने व्रmममा विद्यार्थीले विषय विज्ञद्वारा पढाइका बारेमा जानकारी हासिल गर्ने अवसर पाउँछन् ।
दैनिक ४ घण्टा सुविधा सम्पन्न क्लासरुपमा ‘ब्रिज कोर्स’ पढाइने र २ महिनाका लागि ५ देखि ७ हजार रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्ने उनी बताउँछन् । ‘पाँच सात हजार रुपैयाँ ठूलो कुरा होइन, जबकि २ महिनाको ‘ब्रिज कोर्स’ले आफ्ना छोराछोरीको उच्च शिक्षाको बाटो राम्रो हुन्छ भने हरेक अभिभावकले कञ्जुस्याइँ नगरुन् भन्ने मेरो अनुरोध छ’–उनी बताउँछन् ।
हाल झापाको विर्तामोड र दमकमा ‘ब्रिज कोर्स’ पढाउने कन्सलटेन्सीहरू थुप्रै सङ्ख्यामा खुलेका छन् । कतिले भौतिक पूर्वाधारबिनै ब्रिज कोर्स पढाउने भन्दै विज्ञापन गर्दै आएका छन् । पढाउने शिक्षक कस्ता छन् ? भौतिक पूर्वाधार छ कि छैन ? शिक्षाको व्यानरमा व्यापार गर्न मात्र खुलेका हुन् कि साँच्चिकै सेवा पुर्याउने उद्देश्य पनि छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ नखोजी जथाभावी ब्रिज कोर्स पढ्नु पनि उचित हुँदैन ।
कक्षा १० सम्म साङ्लोमा बाँधेर डोहोर्याए सरह पढेका पन्ध्र सोह्र उमेरका विद्यार्थीलाई ब्रिज कोर्स गराइयो भने उनीहरू कक्षा ११ मा जुनसुकै रुचिको विषय पढ्नका लागि सहज र सक्षम अनुभूति गर्छन् । ब्रिज कोर्स पढेका बेला विद्यार्थी कुन विषयमा तेज र कुन विषयमा कमजोर छ भन्ने पहिचान समेत हुने भएकाले त्यहाँबाट राम्रो परामर्श पाउने सम्भावना रहन्छ ।
ए लेभल, एडभान्स साइन्स, मेनेजमेन्ट, स्टाफ नर्स, एचए, ल्याव कोर्सका लागि बोस्टन एजुकेसनमा ब्रिज कोर्सका क्लास सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
‘झापामा पहिलोपल्ट ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने श्रेय पाउँदा खुशी नै लाग्छ’, बोस्टन एजुकेसनका अध्यक्ष जमरकट्टेल भन्छन्–‘शिक्षा क्षेत्र मुलुकको दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने विकासको आधारशीला हो, बोस्टन एजुकेसनले आफ्नोतर्फबाट इमान्दार योगदान पुर्याइरहेको छ, पुर्याइरहने छ ।’
ब्रिज कोर्स किन ?
एसएलसी दिएका विद्यार्थी भनेका उच्च शिक्षाको ठूलो सपना सजाएका मुलुकका कर्णधार हुन् । उनीहरूमा आत्मविश्वास जगाउन आवश्यक छ । उच्च शिक्षाको विषय बारे जानकारी गराउँदै आत्मविश्वास बढाउन ब्रिज कोर्स आवश्यक पर्छ ।
बोस्टनमा कुन कुन विषयको ब्रिज कोर्स छ ?
ए लेभल, एडभान्स साइन्स, मेनेजमेन्ट, स्टाफ नर्स, एचए, ल्याव कोर्सका लागि ब्रिज कोर्सका क्लास सञ्चालन हुन्छन् ।
एसएलसी दिएका विद्यार्थीलाई सुझाव ?
अब नयाँ ढङ्गले अध्ययन सुरु हुनेवाला छ । जीवनभर मानिसले सिकिरहेका हुन्छन् । खाली रहेको यो ३ महिना समय खेर नफालौँ, ब्रिज कोर्स गरेर आफुलाई सक्षम बनाउन म आग्रह गर्दछु ।